FENOARIVO-ATSINANANA : Nasehon’ny komity 26 jona fa afaka mifety tsara ao anatin’ny fitsitsiana
Manaraka hatrany ny toromarika omen’ny fanjakana foibe ireo solontenam-panjakana ao Fenoarivo-Atsinanana. 27 juin 2019
Araka ny efa niaraha-nahita, dia nofoanana ny fiaraha-misakafo fanao isan-taona teny Ivoloha rehefa 26 jona. Nanaraka izany lamina izany ihany koa ny tao an-drenivohitry ny Faritra Analanjirofo ka tsy nasiana fiaraha-miala hetaheta taorian’ny matso.
Niezaka nampihatra tanteraka ny politikam-pitsitsiana. Na teo kosa anefa izany, dia tomombana antsakany sy andavany ny fikarakarana ireo hetsika rehetra.
Nifalihavanja ny mponina tao Fenoarivo-Atsinanana. Nisy ny fanentanana isan’andro teny amin’ny “podium” teo anoloan’ny biraon’ny prefektiora. Fanentanana narahina fifaninanana ara-panatanjahantena sy ara-koltoraly. Ny alin’ny 25 jona, nahazo ny anjara tamin’ny afomanga ny tao an-toerana.
Voaporofon’ny komity mpikarakara ny 26 jona tao Fenoarivo-Atsinanana fa afaka mahavita fety tsara sy milamina na dia mampihatra ny politikan’ny fitsitsiana aza. Komity 26 jona izay tarihin’ny Prefen’i Fenoarivo-Atsinanana, Belahy Théophile.
Maro ireo hetsika nisy. Anisany nahaliana olona maro ilay fifaninanana mianika hazo malama. Hazo nohosorana menaka, asiana vola eny amboniny, ka izay mahavita mianika dia azy izay vola azony eny ambony eny.
Jiolahy mpandroba izy roalahy maty voatifitra fa tsy tanora mpianatra AMBALAKISOA TOAMASINA (215) 20 janvier 2020 Nahatratra hosoka miisa 89 tamin’ny fidirana ho miaramila ETAMAZAORO JENERALIN’NY TAFIKA (193) 20 janvier 2020 Naato tamin’ny asany ny Lehiben’ny Pompiers FIHOTSAHAN’NY TANY TENY AVARADOHA (133) 21 janvier 2020 Miatrika famotorana lalina ny tale jeneraly teo aloha ORINASA KRAOMITA MALAGASY (123) 22 janvier 2020 Nahitana fatim-behivavy tsy nisy loha novonoina tao Analaradjy SAINTE-MARIE (114) 20 janvier 2020 Mpampianatra 500 mahery nahazo fifanarahana arak’asa FANABEAZAM-PIRENENA (96) 20 janvier 2020